आउने निर्वाचनमा महिलालाई चुनौति र अवसर दुवै : दाहाल
२०७४ बैशाख २ शनिबार १३:२४:४७ प्रकाशित
उदयपुर जिल्लाको रुपाटार भन्ने स्थानमा २०३३ साल फाल्गुण ४ गते जन्मिएकी गंगा दाहालले आफ्नो बैवाहिक जिवन यात्रा पश्चात २०६० साल देखि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल महिला संघबाट राजनीति सुरुवात गरेकी हुन् । उनी यतिबेला नेपाल महिला संघ सिन्धुलीको जिल्ला सभापति छिन् । त्यति मात्र नभई महिला मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक गैसस, जिल्लाको सक्रिय गै्रहसरकारि संस्था हाम्रो प्रयास नेपाल जस्ता सस्थामा उच्च ओहोदामा वसेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्रियाशिल दाहाल आउदो बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई दुधौली नगरपालिकाको मेयर पदका लागि दाबेदार ठान्छिन् । सक्षम महिलाहरूलाई अब कांग्रेसले मात्र नभई देशमा रहेका सबै पार्टीहरूले मेयर लगायत नेतृत्व तहमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्ने गंगा दाहाल राजनीतिसँगै सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । उनै दाहालसँग स्थानीय निकायको निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर पत्रकार पुस्कर सहयात्रीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजनीति र सामाजिक रूपमै यत्ति धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ । कसरी समयको म्यानेज गरिरहनुभएको छ ?
महिला भएकै कारण चुनौतिहरू छन् । महिलाकै कारण समाजमा अगुवाइ गर्न कठिन छ । तर मेरो घरपरिवार र श्रीमानबाट सक्दो सहयोग मिलेका कारण म अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेकी छु । समाजमा अनेक खालका आरोपहरू पनि आए त्यसलाई मैले संघर्षका रूपमा लिएँ । म कतैबाट विचलित नभई समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि, महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न र उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि म निरन्तर लागि परिररहेकी छु ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने भन्ने नयाँ संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तपाईंको अनुभवमा अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला हुदैमा महिलाहरूका सवाल सकिन्छ भन्ने मान्यता अहिले अगाडि सारिएको छ । त्यो ज्यादै गलत छ । महिलामैत्री संविधान त बन्यो तर सो अनुसार हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान सहभागिता भएकै छैन । दुरदराजका महिलाहरू अहिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यही बीचमा सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकेसँगै मैले पनि दुधौली नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिरहँदा सबै पार्टीका पुरुष साथीहरूले अर्कै दृष्टिले हेर्ने काम भइरहेको छ । अहिले पनि पितृसत्तात्मक संस्कारका कारण महिलाहरू उपेक्षित छन् । सबै पार्टीहरूले क्षमतावान् महिला नेतृहरूलाई मेयरपदमा उम्मेद्वारी दिनुपर्छ । नभए ३३ प्रतिशतको सहभागिता भन्नेकुरा केवल संविधान र कागजमामात्र सीमित हुन्छ ।
आउने स्थानिय निकायको चुनावमा महिला उम्मेदवारका लागि चुनौती के देख्नुभएको छ ?
जित्ने महिलालाई टिकट दिनुपर्ने हो तर फलानो र ढिस्कानुको मान्छे भन्दै अरुलाई टिकट दिने अवस्था आउने देखिन्छ । अर्को दलको महिलाले जिते पनि हुन्थ्यो तर पुरुषले जितिदिन्छ । हामीले कुनै पनि विषय अघि बढाउन त्यसको सम्भावना, परिणाम र प्रभावबारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ। महिला संगठनहरुले पनि आफ्नो मानिसभन्दा पनि सक्षम र इमान्दार महिला जुन संगठनको भए पनि कसरी जिताउने भनेर लाग्नुपर्छ । विश्वका कैयौ देशभन्दा नेपालमा पक्कै पनि महिलाको राजनीतिमा सहभागिता राम्रो छ । तर सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सामाचार लेख्दा ध्यान दिनुप¥यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि चुरा बझाउँदै, भाँडा माझ्दै, घाँस काट्दै गरेका महिला सभासद् भए भन्ने जस्ता समाचार आए । महिलालाई चुरा लगाउन, भात पकाउन र घरको काम गर्न सिकाएको छ त, त्यो हुने नै भयो ।
सुन्नुस न ! यो चुनावमा बढी नै उत्साहित देखिन्छन महिलाहरु, किन होला ?
यो हिजोको स्थानीय चुनाव होइन । यसमा यति धेरै शक्ति छ, स्थानीयरूपमा सिंहदरवार सरेको हो । हिजो २००९ सालमा बिपी कोइरालाले ल्याउनुभएको विकेन्द्रीकरणको अवधारणा २०७३ सालमा लागु हुन थालेको हो । दिदिवहिनीलाई हेर्छु यसले मेयर लडिदिए हुन्थ्यो भनेर लागेको हुन्छ, सोध्यो उपमेयरको कुरा गर्छन् । क्षमता भएका महिलाले पनि आफूलाई अलि तल राखेर कुरा गर्ने देखेको छु ।
अहिले हामीलाई चुनौती र अवसर दुवै छ । अहिले महिलामा पनि हामी त्यहाँ जानसक्छौं भन्ने त्यति देखेको छैन । म लड्छु र गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत राख्न सकिएन भनेर मानिस अघि बढ्दैन । बच्चा त च्याँ गरेर नरोइकन भोक लागेको छ भनेर खुवाउँदैनन् भने राजनीतिमा सहभागिता झनै चुनौतीपूर्ण छ । शीर्ष स्थानमा पुग्ने एक दुईजना मात्रै हो त्यसले म को हुँ, कहाँ छु र क्षमता के हो भनेर मध्यनजर राख्दै आफ्नो क्षमता विकास गरेर अघि बढ्न सकियो भने केही हासिल गर्न सकिन्छ । उपमेयरमा पनि महिला ५० प्रतिशत आउँछन् जस्तो लाग्दैन । अहिले धेरै होलाल्ला गरिसकियो तर महिला उठेको ठाउँमा अरु दलसँग मिलेर अर्कोलाई जिताउने गर्न बेर छैन । एउटा दलले पुरुषलाई मेयर दिन्छ र अर्को दलले उपमेयर दिन्छ । हिजो संसदीय निर्वाचन त्यस्तै भएको थियो । त्यसैले महिलाले पनि फेमवर्कभन्दा माथि निस्केर एउटा महिलाका लागि के के गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।
यसपटक धेरै महिला नेता तयार हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कांग्रेस र अरु दलमा पनि महिलाबीचै एकता भएन । एकता अलि बढी हुने र पार्टीले अलिकति सकारात्मकरूपमा लिइदिने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ । तर कानुनले तोकेबमोजिम पनि काम गर्दा छल्ने काम हुन्छ । पछिल्लो संविधानसभा चुनावको समयमा प्युठान र धादिङ त्यसको उदाहरण बने। जित्ने सम्भावना भएको महिलालाई नदिने र टिकट दिए पनि जनाधार कमजोर भएको स्थानमा उम्मेदवार बनाउने काम भयो । अबचाहिँ त्यस्तो भएन भने निश्चितरूपमा धेरै महिलाले जित्नेछन् । महिलाभित्र पनि समस्या छ । जानेर हो वा नजानेर महिलाले नै महिलाकै कुरा काटिरहेका हुन्छन् भने खुट्टा तान्ने काम पनि हुन्छ । एउटा कारण आर्थिक हो भने अर्को पितृसत्तात्मक सोच पनि हो । केही कसैको केही परिहाल्छ, यो गई भने आफू तल परिन्छ भनेर असहयोग गर्ने कामचाहिँ बन्द हुनुपर्छ ।
तपाईँ आफूलाई आफ्नो पार्टीले दुधौली नगरपालिकाको मेयर पदका लागि टिकट दिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
तपाईंले आफूलाई मेयर पदको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्नुभएको छ । यो नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि तपाईंका योजनाहरू के के छन् ?
सबैभन्दा पहिला दीर्घकालीन विकासका योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछु । ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने छु । मापदण्ड अनुसार घर तथा भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने छु । जग्गाहरू अनावश्यक रूपमा प्लटिङ गरिएका छन् । त्यस कार्यलाई पनि व्यवस्थित गर्ने योजना छ । नेपालकै नमूना नगर बनाउनका लागि विशेष योजनाका लागि विशेषज्ञहरूको टोलीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छु ।
गाउँ निर्वाचनमय भएको छ । जनताहरू मत हाल्न एकदमै उत्साहित छन् । सरकारले निर्वाचन रोके पनि जनता मतदान गर्न रोकिने अवस्थामा छैनन् । अब हाम्रो भनाइको सुनुवाइ हुने भयो भन्नेमा जनताहरू छन् । जनताहरूले सक्षम व्यक्तिलाई मेयर उपमेयरमा जिताउने भनिरहेका छन् ।
समयको लागि धन्यवाद........
तपाईलाइ पनि विषेश धन्यवाद छ ।